Uma uqala i-Biathlon: Imininingwane engeziwe mayelana esidlule nezinkathi zamanje
Biathlon Ingabizwa kufanele ngokuthi sport ethandwa kakhulu. skiers Abaningi bathatha isibhamu. hockey kuphela angakhuluma esincintisana kuphela. Njengoba nje ebusika siyasondela, bonke abalandeli uqale nentshisekelo umbuzo lapho Biathlon iqala. Eminyakeni ethile edlule, inkathi Biathlon iqala ngesonto eledlule kukaNovemba, izinhlanga ezintathu kubantu besilisa nakubantu besifazane, eyokuqala kwaba ngazinye, liphinde zakudala.
Qala isizini entsha
Manje konke ishintshile kancane, futhi umncintiswano sokuqala edluliselwe okuxubile, ephumela isizini Biathlon. Edluliselwe senzeka ngeSonto, bese abasubathi babe izinsuku ezimbili lokuphumula, futhi izinhlanga ngabanye siqale ngoLwesithathu. I 2015 isizini baqala ngoNovemba 30 edolobheni IsiSwidi Ostersund, njengoba ngaso sonke isikhathi.
Zonke uqale baqagela lapho okufanayo izobanjelwa ezigabeni lwesikhombisa lwesishiyagalombili, lapho Biathlon iqala. Ngalesi sikhathi, i-International Biathlon Union ayifakile esiteji ezimbili phesheya uhlelo World Cup. Isigaba lwesikhombisa kwaba nomhlangano e Canmore, eCanada nase-lwesishiyagalombili kwaba nomhlangano e Presque Isles, United States of America. Kwaphakama izinkinga ngesikhathi esigabeni sokuqala-North American. ochwepheshe Canadian zehlulekile ukwenza ukusakaza evamile lomcimbi.
Uma izinguquko njalo emabangeni lwesikhombisa lwesishiyagalombili konke esetshenziswa, ngoba cishe njalo ngonyaka bayashintsha eminyakeni edlule, izibukeli futhi abahleli mncintiswano usuqalile ukujwayela yokuthi izinyathelo lesibili nelesithathu kungenziwa futhi adluliselwe.
Ngokuvamile kwenzeka ukuthi Pokljuka akakwazanga ukuthatha uhlanga ngenxa yesimo sezulu, i-Hochfilzen Austria wenqaba uzoshiya aphume "nebiatlonnoy" sezulu. Ngesizini edlule, akwenzekanga. Nokho, kwafika enkingeni ngenxa elinde. Isigaba lesithupha, okuyinto ngokuvamile eyaqhutshwa ngo Oberhof, eJalimane, washukumiseleka ukuba Ruhpolding. Ngakho, eBavaria senzeka ngo emibili elandelanayo World Cup.
Isigaba lesithupha senzeka schedule - e Italian Antholz, kanye wokugcina - e Khanty-Mansiysk, lapho waphinda izilaleli zase zikwazi ukubona Biathlon zokugcina 2015-2016 inkathi. World Cup iqale ngo-February 29, wadonsa kwaze kwaba maphakathi no-March. Uhlanga zokugcina owawuse ngoMashi 13 ngonyaka 2016. Futhi, ngesikhathi kusuka 22 kuya 28 February 20016, abalandeli walo mdlalo sasebusika ukubukela Championship European.
Le mpi kule esicongweni jikelele
Imincintiswano kwabesifazane babesendlini futhi kanzima kakhulu. Njengoba kule sizini 2014-2015, igebe phakathi kwezingane endaweni yokuqala neyesibili wayengekho omkhulu kakhulu. UGabriela Klara Koukalová kukora 1106 amaphuzu, no Marie Marie Dorin Habert - amaphuzu 43 ngaphansi. Kungani lo mdlalo ungomunye okungcono, waphinda iyibonakalisa Biathlon 2015-2016 inkathi. Marie Marie Dorin Habert wenza ibuya emangalisayo, ngokushesha baba ingqwele izwe kubuyela ezemidlalo emva umntwana.
Enye ukunqoba Fourcade
Wonke umuntu ulinde, uma uqala Biathlon, omunye izimbangi uzama inselelo Martin Fourcade. Kodwa waphinda futhi akwenzekanga. I engumFulentshi kwaphinde amabombo namahlombe ngenhla zonke izitha zakhe, kanye izimbangi ukuthi kunzima ukubiza. Futhi, kukhona enye umsubathi French ezithakazelisayo - Quentin Fiyon Maye, eyabonisa ukuthi eFrance Biathlon ithuthuka ngokushesha.
World Cup waphinda futhi wathola Fourcade, owayeneminyaka ngaphambi babaxoshayo bakhe abaseduze lapho sibhekene Johannes Yiba amaphuzu ezingaphezu kuka-300, futhi Fiyon Maye matasa indawo yeshumi nambili ku Ukuma jikelele. Kancane ngemuva kusukela omele Norwegian we Russian Federation Anton Shipulin. Izindawo lesine nelesihlanu waya amabili Simon German Shemp kanye Austrian Edere ngokulandelana.
Ngesizini edlule, Fourcade wakwazi ukunqoba yesihlanu elandelanayo imbulunga wakhe Omkhulu. Ngenkathi 2016-2017, konke kuhambe yokuthi le engumFulentshi zingenza futhi Globe lesithupha. Ngaphambi kwalokho, impumelelo enjalo alikwazanga iyiphi biathletes olulodwa emlandweni mncintiswano.
Maphakathi Januwari 2017 Fourcade okumalungana 300 iphuzu abaholayo Ukuma jikelele kusukela abawasukelayo yakhe eyinhloko: Shipulina futhi Shemp. izigaba eziyisithupha agcinwe kule sizini entsha, kusenabantu izigaba ezintathu kanye World Cup, kodwa usongo ufile.
Ilungiselela ngesikhathi seNdebe yoMhlaba
Uma uqala i-Biathlon, bonke abadlali kanye abaqeqeshi sebeqala ucabange indlela ukufinyelela ifomu isiqongo esikhathini ngesikhathi seNdebe yoMhlaba. Othile ikhumbule umjaho kanje kwenza Ole Einar Bjoerndalen, umuntu - ngisho izigaba lonke. Ngokuvamile izinguquko ukuze nqubo yokulungiselela kuletha isifo.
German umsubathi laura dahlmeier ingenye abanamakhono kakhulu futhi ethembisa. Nokho, isiJalimane abasha wahluleka ukugxilisa ingqondo ngokugcwele ukulwa e-World Cup ngenxa yokuthi lesi sifo evezwa, ngakho ukuthi ukhumbula eziningi izinhlanga izigaba, akukho ibala ibalulekile ngoba impi kule jikelele Ukuma amaphuzu. Kodwa lokhu Biathlon. Isizini eside, ngakho bonke abasebenzi coaching abasubathi ngokwabo okudingeka bahlakulele amaqhinga kwesokudla futhi isu ukuba izinhlanga kubalulekile isesimweni esihle futhi ukunciphisa ukulahleka uma isimo esibi ngokomzimba.
Ngenkathi 2016/17 laura dahlmeier futhi uphuthelwe izinhlanga ezimbalwa, kodwa ngaphambi World Cup, ezoqala ngo-February 9, 2017 e-Austria, kusenzima umholi we Ukuma jikelele, kodwa inzuzo yayo phezu UGabriela Klara Koukalová futhi Kaisa Makaryaynen akuyona omkhulu njengoNkulunkulu ukuthi we Fourcade. Ngakho-ke, le mpi usanda waqala ngo mncintiswano labesifazane.
Indlela Thenga Rollers Wabasaqalayo?
Kuyini indlela yokwakheka izindondo-Olympic?
Umgibeli American Greg Lemond: Biography, kwezemidlalo
Ukulungiselela Idatha nokunyakaza azimuth
Bangaki amakati izinzwane evamile futhi ngobani namakati polydactyl
Ama-parrots e-Wavy akhuluma: abakhulumi-nkulumo nokuziqonda